Accueil > Gazetin'ny nosy > Orin’asa Kraoma: Namidin-dRabary Njaka Henry tamin’ny Rosianina ?
Orin’asa Kraoma: Namidin-dRabary Njaka Henry tamin’ny Rosianina ?
Iray amin’ireo olona vitsy dia vitsy tena mpanampatra fahefana eo anivon’ny Hvm ny minisitra ny Harena ankibon’ny tany, Henry Rabary Njaka. Tsy tokony hatao mahagaga izany satria fony izy mbola tany ampitan’ny ranomasina no efa nanangana vondrom-barotra matoatoa (société fictive) ry zareo ka nitavana fotsiny ny volan’ny Air Madagascar.
Izy no toy ny olona tena mahatoky teo anilan-dRajaonarimampianina tamin’ireny fotoanan’ny fampielezan-kevitra tamin’ny fifidianana filohampirenena tamin’ny taona 2013 ireny. Betsaka ny feo re fa tra-pahavoazana tsy fidiny tamin’izany satria tsy voaloan-dry zalahy ny vola nifanarahana tamin’ny fiantohan-draharaha isan-karazany tamin’ireny fampielezan-kevitra tamin’ny 2013 ireny, ary voatonona manokana tamin’izany ny anaran-dRabary Njaka Henry.
Amin’izao fotoana itantanany ny ministeran’ny Harena ankibon’ny tany izao dia efa nampoizin’ny mpanara-maso ny raharaham-pirenena ny zavatra tsy maintsy hitranga. Satria moa efa tsinjon-dry zalahy fa efa taninandro hariva sisa ny ananana an’izao fitondrana izao, izany hoe efa resy lahatra na ry zalahy eo anivon’ny rafitra vovonan’ny Hvm aza fa tsy hahita mangirana amin’ny safidim-bahoaka amin’io fifidianana filohampirenena ho avy io ka dia ara-bakinteny mihitsy ny hoe “mandrovi-tsihy”. Manararaotra faramparany e!
Efa voaresaka an-gazety tamin’ity herinandro ity ny fidirany an-tsehatra tany amin’ny faritr’Ilakaka ka nampiasany ny fahefam-panjakana amin’ny maha-minisitra ny Harena ankibon’ny tany azy ka mody nanao famelabelarana momba ilay “Vina fisandratana amin’ny taona 2030” momba ny harena an-kibon’ny tany izy. Ny tena foto-diany anefa dia ny haka ny anjarany tamin’ilay safira voatrandraka tany Antsomadiro, tanàna kely iray 30 km miala an’Ilakaka.
Dia voaresaka an-gazety koa omaly fa vao namoaka fiaramanidina kely Ingahirainy, ary izy mihitsy no nidina an-tsehatra nanatona ny sampan-draharahan’ny fadin-tseranana momba ny ho famoahana an’io fiaramanidina kely io eny amin’ny seranam-piaramanidina eny IVato
Dia mifametra-panontaniana ny mpanara-maso ny raharaham-pirenena hoe “mety ho mitovy vidy amin’ny vatomamy eny an-tsenakely angaha ny vidin’ny fiaramanidina no tampotamopoka eo ry zalahy ny afaka mamoaka fiaramanidina ?”
Fa ankoatra izay, niteraka ady hevitra teo amin’ny tontolon’ny raharaham-pirenena koa ny fametraham-pialan’ny tale jeneralin’ny orin’asa “Kraomita Malagasy” (Kraoma), dia i Arsène Rakotoarisoa. Raha ny re fa anton’ny fametraham-pialany dia noho ny nahalasanan’ny mpanam-bola rosianina ny 80% amin’ny renivola miasa ao amin’ny Kraoma. Voatonona ho tompon’ny fifampiraharahana sy ny fandraisana fanapahan-kevitra farany tamin’izany ny minisitra Henry Rabary NJaka.
Ankoatra izany, re koa fa Rabary Njaka Henry no tompon’andraikitra voalohany amin’ny fifampiraharahana ara-bola amin’ny any ivelany hikarohana loharanom-bola hoentin’nty Hvm miatrika ny fifidianana, hiantohana ny fampielezan-kevitra. Ka ny tranga toa izany moa dia tsy maintsy misy mandrakariva ny takalom-patsa vidim-pihinanana, ka nanatombo ry zareo Hvm izay mitana ny fahefam-panjakana amin’izao fotoana momba an’izay fifampiraharahana eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena izay satria afaka mivarotra mivantana ny harem-pirenena, toa izao nanomezana ny 80%n’ny renivolan’ny orin’asa Kraoma izao ho an’ny Rosianina.
Ampolon-taonany maro no nitrandrahana sy nanondranana ny Kraomita tao Andriamena Tsaratanàna fa tsy mbola nisy feo re hoe “mandia fotoan-tsarotra ny orin’asa”. Ny dikan’izany, nandeha tsara, ka nahoana no namidy ho an’ny vahiny? Ny tombontsoa manokan-dry zalahy izany no nataony ho laharam-pahamehana tamibn’izany, satria ny raiki-pohy (formule) momba ny fifampiraharahana toa izany dia tsy maintsy mahazo ny ampahany ny nanao sonia.